အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: January 2010
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ပေါက်လာကြသော ဆူးများ..
ဘလော့နဲ့..ဘလော့ဂါ
တချို့ က သုတ..တချို့ ကျ ရသ
တချို့ ကစေတနာ..တချို့ ကျ..ဝေဒနာ.
တချို့ ကလည်းဝါသနာရှင်..တချို့ ကလည်း..ထွင်..
တချို့ က ဟင်းချက်..တချို့ ကျ အကြွားစွက်…
တချို့ က သမိုင်း..တချို့ ကျ အရိုင်း
တချို့ က ကဗျာ..တချို့ ကျ တဏှာ
တချို့ က သတင်း..တချို့ ကျ အဖျင်း
တချို့ က အရှုပ်..တချို့ ကျ အပုတ်
တချို့ က ထင်ပေါ်..တချို့ က ဆော်
တချို့ က.တော်လှန်ရန်..တချိူ့ ကျ ပုဆိုးလှန်..
တချို့ က အမှန်…တချို့ ကျ မြာဖန်..
တချို့ က မောက်မာ..တချို့ ကျ ကြောက်ရှာ..
တချို့ က ရှက်တတ်..တချို့ ကျ ခေါင်းပုံဖြတ်..
တချို့ က ဆရာကြီး..တချို့ ကျ ညာဖြီး..
တချို့ ကျ ရှေ့ ဆောင်…တချိူ့ ကျ တက်မထောင်..
တချို့ ကျ..ခေါင်းဆောင်.တချို့ က ခေါင်းရှောင်..
ငါ ရနိူး..သူကျ နိူး..
ပေးပါ ငါ့မဲ..ထည့်ကြ ကျနော့ တစ်ဖတ်
အတ္တတွေ ကြားထဲက… မောဟတွေ မဲ
သားရဲ မရဲ ဘလော့ဂါများ..
on line ပေါ်ကျက်စား.. ကောင်မလေးတွေ ဆွဲစားနေတယ်
နှစ် ၂၀ လုံးလုံး ဆုံးခဲ့တာတောင်
အရှက်မရှိ လေက မလျှော့..
" တိုက်ကြပါ…ငါညီတွေ ရှေ့တက်..ရှေ့ တက်..
သတင်းပို့ ကြ မပျက်မကွက်
အကိုတို့ က နောက်ကနေ တွန်းပို့ မယ်.."
ယောင်တောင်ပေါင်တောင်..ကောင်မလေးတွေနဲ့ရောရှက်
အချိန်ပြည့် online ပေါ်မှာ cyber sex.
ဒီလို သဘောက်သားမျိုးနဲ့ 
နောက် အနှစ် ၂၀ တောင်မမီ။
အရိုးနဲ့ သာ အလံထူရိုးရှိတဲ့ အာဇာနည်..
မသဒ္ဓါ (၁။ ၈။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:34 AM5comments
တော်လှန်ရေးတို့ ၏ အာဇာနည်..
ဦးဆွေးသောဆံ အရိ်ုးနှင့် မှင်တံ..
အသွေးကို မှင်..အရေကို ပုရပိုက်…
အတ္တကို ဖြတ်.. မျိုးရိုး၏ ဂုဏ်ဒြဗ်အတွက်
၀ိညာဉ်ကို စွန့် လွှတ်အပ်ပါသောသူ…
သင်သည် အမိမြေ၏ သားကောင်းတဆူ..
သင်၏ အမည်သည် မသေ…
သင်၏ သွေးသည် မခြောက်..
သင်သည် အုန်းကျော်မြင့်သို့ သော စစ်သည်…
အမှန်ကို အသက်ဖြင့်် လဲလှယ်ခဲ့သည်။
သင်ပြသော လှို့ ဝှက်သောစာ..
ကမ္ဘာမှာ…နအဖ ဆိုတာ..မည်သို့ သောသူ..
ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။..
မညစ်သော သင်၏ အမည်…
ဂုဏ်သရေရှိ အာဇာနည် စစ်သည်။
တနေ့ လွမ်းသူပန်းခွေ လာချပါမည်။
မသဒ္ဓါ ( ၁။၇။၂၀၁၀)
ဗိုလ်မှူးဝင်းနိုင်ကျော် နှင့် အပေါင်းအပါ.. ရဲဝံ့သော အာဇာနည်များသို့ ..လေးစားစွာဖြင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:22 AM0comments
မြူခြေဆိုင်းတဲ့ ရိုးမတောင် အဆင့်ဆင့်
ကိုယ်တိုင်..စိုက်ခဲ့တဲ့ ဥယျာဉ်မြေ ဘုရားနဲ့ တန်ဆောင်း
ကိုယ် ပြုစုခဲ့တဲ့ ..သားမောင်ဦးဇင်း.
အုံအင် အော်ဆဲ ဖားရဲ့မိုးခေါ်တေး..
ဒါ ဒို့ မြေရွာ..
ခုများ ကိုယ်က အဝေးမှာ…
မုဒိန်းကျင့်ခံ သတို့ သမီး..
အကျင့် သိက္ခာတို့ ပျက်စီးနေ…
ဒါးမြ အတိုက်ခံနေရတဲ့ မြေ..
လက်ဘက်တောင် ဆီဆမ်းမစားနိုင်တော့တဲ့ တောရွာ
နိုင်ငံခြားပညာတတ်..အိမ်ပြန် လယ်စိုက်ခဲ့တဲ့ အဖေ..
ကလေးများ စာအံသံပြန်ကြားရမဲ့နေ့ 
တရွေ့ ရွေ့သာ..စက္ကန်ုတန်ရွေ့ တယ်..
ဆွေးမြေ့ခဲ့ ဒို့ မြေယာ…
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:14 AM 1 comments
ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ၂၀၀၉ ရဲ့ ၃၆၅ ရက်..
တစ်ရက် နှစ်ရက် သုံးလေးရက်နဲ့ 
နောင်လာမဲ့ နှစ် ၂၀ ဆိုတာ..
ချန်ထားခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ဆိုဘဲ..
နှင်းမြူငွေ့ တွေထဲ ဝေ့၀ါးဆဲ ပန်းချီတချပ်…
ဒို့ ခေတ်မှာ ညံ့တယ်တဲ့လား.?
ဒို့ တွေ ညံ့တာမဟုတ်..
သူယုတ်တွေ က ဒို့ ထက် ရက်စက်တတ်တာ..
လူဆိုတာ သေမှာကျ ကြောက်တာဘဲ..
လောကမှာ မဖြစ်တာ မရှိ..
့မြန်မာ၏ အနာဂတ်ကို သင် တွေးရဲလား..
လူသတ်သမားတွေ စစ်တန်းလျှား ပြန်သွား..
ရှေးရိုးစွဲ ခေတ်မမှီ အာဏာရှင်..
သင်တို့ ကို ပြည်သူုအလိုမရှိ..
မသဒ္ဓါ ( ၁။၁။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:42 AM2comments